ငွေသုံးသိန်းရှိတယ် ဘာရင်းနှီးရင် ကောင်းမလဲ အရမ်းကောင်းတဲ့ Idea လေးပါ …. – Shwe Thoon 8 Online Media
ငွေသုံးသိန်းရှိတယ် ဘာရင်းနှီးရင် ကောင်းမလဲ အရမ်းကောင်းတဲ့ Idea လေးပါ ….
…သိပ်ကောင်းတဲ့ idea တစ်ခုကို မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်။ အရင်းဆုံ ကိစ္စမတင်ပြခင် ပြောပြသင့်တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခု ရှိပါတယ် …။
စတိမ့်ဖော့်(Stanford) တက္ကသိုလ် ကကျောင်းဆရာမ ဖြစ်သူ တီနာ ဇီးလစ်(Tina seelig) ဟာကျောင်းသား/သူတွေကို စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုပြုလုပ် လိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းသား/သူတွေကိုအသင်း (၁၄) သင်းဖွဲ့လိုက်တယ်။ အသင်း (၁)သင်းစီ ကို စာအိတ် (၁) အိတ်စီ ပေးပါတယ် …။
စာအိပ်ထဲမှာငွေ (၅)ဒေါ်လာ ထည့်ထားသည်။ (မြန်မာငွေ ကျပ်= ၆၅၀၀ ၀န်းကျင်)ငွေ(၅)ဒေါ်လာထဲနှင့် ကိုယ့်အိုင်ဒီယာ ကိုယ် သုံးပြီး။ အရင်းအနှီး လုပ်ခိုင်း မည် ။ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်က ပြင်ဆင်ချိန် (၁) ပတ်ရမည် …။
စာအိတ်ထဲကငွေ(၅)ဒေါ်လာဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်သည့် လုပ်ငန်းကို သွားရင်းနှီးပြီး ငွေထပ် တိုးလာအောင် လုပ်ဆောင်ရမည်။ စာအိတ်ကို ဖောက်လိုက်သည်နှင့် ရင်းနှီးရမည့် အချိန် (၂)နာရီသာ လုပ်ရမည် …။
(၁၄)သင်းစလုံး ရင်းနှီးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါက ၂ နာရီအတွင်း ရင်းနှီးခဲ့သည့် ပုံစံ၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပြန်ရလာသည့်ငွေ၊ စသည့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှကို အခန်းရှေ့သို့ ထွက်ပြီး ကျောင်းသား/သူ အားလုံးရဲ့ ရှေ့၌ပြန်လည် ရှင်းလင်း ပြောပြ ရမည်ဖြစ်သည် …။
အသင်း(၁)သင်းစီရဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားရမည့် အချိန်ဟာ (၃)မိနစ် စီသာ ရရှိ မည်ဖြစ်သည်။ ဒီစိန်ခေါ်မှုမှာရင်းနှီးပြီး ငွေပြန် မရသည့် အသင်းရှိ သလို၊ငွေ အတော်အသင့် ပြန်ရ လာသည့် အသင်းလဲ ရှိသည်။ အံ့အားသင့်စရာက အသင်း (၁)သင်းဟာဒေါ်လာ (၆၀၀)ကျော်အထိ အမြတ် ရရှိအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့ သည် ။ မြန်မာငွေ ကျပ်(၇သိန်း ၈သောင်း)၀န်းကျင်၊ ထူးဆန်းသည်က စာအိတ်ထဲ ကငွေ (၅)ဒေါ်လာကို တပြား တချက်မျှ မထိခဲ့ဘူးလို့လဲ သိရသည် …။
ငွေ(၅)ဒေါ်လာမှ = ငွေ(၆၀၀)ဒေါ်လာ ထိဆိုတော့ ၄၀၀၀% အမြတ် ရရှိခြင်းဖြစ် သည်။၂ နာရီအတွင်းထဲနှင့် ဒီအသင်းဘယ်လို လုပ်ခဲ့ပါသလဲ ??ဟုတ်ကဲ့။ သူတို့ အသင်းရဲ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ မဖော်ပြခင် အခြားအသင်းများ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အနည်းငယ် ဖော်ပြ ချင်ပါတယ် …။
အသင်း = (၁)ငွေ (၅)ဒေါ်လာဖြင့် တာယာလေထိုးစက်၊ လေစစ်ဆေးစက် တွေကို ငြားရမ်းလာပြီးကျောင်းတွင်းကကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးပါကင် ထိုးသည့် နေရာရဲ့ အနီးမှာ ၀န်ဆောင် မှုပေးသည်။တာယာ စစ်ဆေးခ၊လေထိုးခတွေကို ၀န်ဆောင်ကြေးယဉ် တစ်စီးကို (၁)ဒေါ်လာ ကောက်ခံသည် …။
ဖြစ်ချင်တော့ ယဉ်စီးနှင်းသူကျောင်းသား/သူများသဘောကျကြသည်။ လမ်းကြုံတုန်းလေး ကိုယ့်ယဉ်ရဲ့တာယာ၊ လေ၊ တွေကို စစ်ဆေး ကြသည် …။
ခဏကြာတော့ သင်းသားတွေဟာ အိုင်တီယာ တခုထွက်ပီး စမ်းသပ်ချင် သည့် စိတ်ဖြင့် ၀န်ဆောင်ခ ငွေ(၁)ဒေါ်လာ မကောက်တော့ပဲ ယဉ်ပိုင်ရှင် ကသာ၊ ၀န်ဆောင်ခကို စေတနာရှိ သလောက်၊ပေးချင်သလောက်ပေး ဆိုသည့် ဆိုင်းပုဒ်ပြန်ပြောင်း လိုက်သည် …။
ကျန်ရှိသည့်အသင်းများဟာလဲဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း။ ကျောင်းတွင်းသို့ချိုချဉ်၊ မုန့်၊ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ခြင်း။ Popular ဖြစ်တဲ့ သီချင်းခွေထုတ်လုပ်ရောင်းခြင်း။ ကျန်သည့် ကျောင်းသား/သူ အားလုံးရဲ ၀င်ငွေ၊ အမြတ်ငွေတွေ ကတော့ မဆိုးကြ ပါ …။
ဒေါ်လာ (၆၀၀) ရှာနိုင်သည့် အသင်း၊ ဟုတ်ကဲ့….သူတို့ အသင်းကေတာ့ အိုင်ဒီယာ အတ်ာလေးကောင်းပါတယ် …။
လုပ်ဆောင်ချက်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ သူတို့ သွားသည်။ ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲနှင့် တွေ့စုံသည်။သူတို့ကျောင်းမှာ ပြုလုပ်နေသည့် စိန်ခေါ်မှုအကြောင်းအားလုံးကို ရှင်းလင်းပြောပြသည် …။
ကျောင်းသား/သူ အားလုံးရှေ့၌(၃)မိနစ် စကားပြောရမည့် အချိန်မှာကုမ္ပဏီအကြောင်းကို ကြော်ညာပေးခြင်း။ကုမ္ပဏီရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ရောင်းပေးခြင်း။ ကျောင်းသား/သူ(၁၄)သင်းဆိုသည်မှာ နည်းသည့် လူတွေ မဟုတ်၊ အခြားကျောင်းသား/သူတွေ လည်း ရှိသေး သည်။
အသင်းအားလုံး ရင်းနှီးပြီးဆုံး ချိန်။ အခန်းရှေ့ ထွက်ပြီး။ ကိုယ့်အိုင်ဒီ ယာငွေရှာ လာသည့် ပုံစံ။ ရရှိလာသည့် အတွေ့အကြုံတွေ ကို ရှင်းလင်းပြောပြ ကြ သည်။
ငွေအများဆုံး ရသည့်အသင်းကတော့ကုမ္ပဏီ အကြောင်း ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကြော်ညာပေးရင်း သူ့တို့ရဲ့ အိုင်ဒီယာ အကြောင်းကိုပါ ရှင်းလင်းပြောပြသည် …။
ဒီအဖြစ် အပျက်ကို ဒီလောက်နှင့်ပဲ အဆုံးသတ် လိုက်ပါတော့မည်။ အရင်းအနှီး တစ
← ၂၀၇၀ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်းသုံးထောင်ကျော် မှာ အလွန်ပြင်းထန်သော အပူချိန်ထဲတွင် နေထိုင်ကြ ရတော့မည်ဟု ပညာရှင်များ သတိပေး ….
နတ်မောက်မြောက်ပိုင်းတွင် မိုးခေါင်၍ စိုက်ပျိုးပြီးအပင်များနှင့် နွားစာများ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေ …. →